Fandefasana tsindry fanontam-pirinty mandeha ho azy haingam-pandeha ho an'ny fiara voalohany ao Shina
Ny tsipika fanaovan-gazety mandeha ho azy haingam-pandeha haingam-pandeha an-trano voalohany novolavolain'i Jinan No. 2 Machine Tool izay vao napetraka ary natolotra tamin'ny fomba ofisialy tao amin'ny toby SAIC-GM Wuhan. Ny tsipika fanoratana servo dia misy presso servo misy rohy 2000 ton, press servo multi-rohy miisa 1000 ton ...Hamaky bebe kokoa »
rakibolana voambolana manokana ho an'ny fanontana vy maty
Fotoana fandefasana: Sep-18-2021
fametahana metaly fanodinana famonoana maty, fanosehana maty ho an'ny fandrosoana, fanarahana (-ny) ho faty, fandrosoana ho an'ny maty, famindrana ho faty ho an'ny famindram-pahefana manety ny tombo-kase deb ...Hamaky bebe kokoa »
Ny fanahafana ny solosaina momba ny fanodinana vy amin'ny indostrian'ny fanamafisam-peo DYNAFORM
Ny fanahafana ny solosaina amin'ny fanodinana vy nohomboina amin'ny indostrian'ny fanamafisam-peo DYNAFORM fiara fitaterana Foreword Metal Stamping dia teknolojia fanodinana vy efa ela. Miaraka amin'ny fizotry ny haavon'ny indostria ary manatsara hatrany ny haitao fanaovana stamping, manisy ...Hamaky bebe kokoa »
Fanitsiana ny famoahana sary ho an'ny faritra manarona fiara
Ny fanitsiana ny famoahana sary ho an'ny faritra fitaterana fiara-fiara 【Abstract】 Ny teboka famolavolana sy ny traikefa lehibe momba ny famonoana fiara dia naseho, ary ny ketrona sy ny fisehoan-javatra mitresaka izay mora mitranga amin'ny fizotran'ny fonon'ny fiara dia voadinika. ...Hamaky bebe kokoa »
Famolavolana sary Die ho an'ny Stamping Stamping Automotive
【Abstract】 Ny teboka famolavolana sy ny traikefa lehibe momba ny famonoana ny sarin'ny fiara dia naseho, ary ny ketrona sy ny trangan-javatra mitresaka izay mora mitranga amin'ny fizotran'ny fonon'ny fiara dia voadinika. Avy amin'ny fandalinana sy ny famolavolana drafitra maty ...Hamaky bebe kokoa »
Ny fanodinam-by metaly sy ny tsy fitoviana amin'ny fanitsiana vy, ny fanoratana ny fehezan-teny teknika isan-karazany
Ny firoboroboan'ny ho avy sy ny fitsarana ny indostrian'ny fametahana vy dia fomba famoronana sangan'asa (ampahany nohomboana vy) amin'ny endrika sy habe irina amin'ny alàlan'ny fametahana hery ivelany amin'ny takelaka, tsipika, fantsona, profil, ary ny toy ny milina fanaovana totohondry sy ny stamping maty ...Hamaky bebe kokoa »
Famintinana ireo olana mahazatra amin'ny fametahana hain-tany sy ny faritra nohomboan'ny vy
Famintinana ny olana iraisana amin'ny fametahana hain-tany sy ny faritra nohomboan'ny vy ary ny famakafakana ny fepetra fanoherana- LangO-matihanina fanontana maty matihanina any Shina 1.Scrap jumping 1) Ny halavan'ny totohondry dia tsy ampy. Hetezo ny totohondry ao anaty maty miaraka amina totohondry ary ampio 1mm hanoloana ilay totohondry. 2) Ny elanelan'ny maty dia ...Hamaky bebe kokoa »
Famaritana Screw sy famintinana fenitra
Mpanao matihanina nohomboana matihanina any Shina, LangO Tool & Die orinasa mampiasa karazana Screws Level-12.9, na metric na Inch. 1. Karazan-kofehy: A: kofehy telozoro (degre 60): Famatorana / fanidiana B: kofehy triangular ho an'ny fantsona (55 degre): Famatorana / fanidiana C: kofehy trapezoid ...Hamaky bebe kokoa »
Ny fanakanana robot dia mitondra ny fiovan'ny maodely famokarana ao amin'ny indostrian'ny fitomboka vy
Tao anatin'izay taona lasa izay dia niova ny tontolon'ny toekarena. Miaraka amin'ny fisian'ny karazana fitaovana automatique vaovao isan-karazany, haingana ny fihodinan'ny R&D, lafo ny vidiny, ary kendrena sy matanjaka be izy io. Tonga dia nahasarika ny mason'ny vahoaka ilay fahaiza-miasa. Anisan'izany ny st ...Hamaky bebe kokoa »
Fanadihadiana amin'ny CAE Springback sy ny fanoherana ny indostria ho an'ny faritra fanidiana fiara
Izahay, LangO Tool & Die orinasa dia iray amin'ireo matihanina fanaovana stamping maty any Shina indrindra ho an'ny fiara maty fiara. Ny fitomboan'ny vy nohitsakitsahana dia olana sarotra ho an'ny faritra nohomboan'ny fiara, indrindra ny akora vy mahery miaraka amin'ny herin'ny vokatra mihoatra ny 600Mpa. Amin'izao fotoana izao, any ...Hamaky bebe kokoa »
Fitaovana milina fitaovana CNC
Fandefasana fitaovana vaovao any Etazonia! fitaovana fitaovana fanitsiana stamping maty fiara mandeha ho azy automatique mandroso famindrana tanden manufacturing additivemanfacturing CBC eaugage milina automatiin fiaraHamaky bebe kokoa »
Ny maty nohomboana fiara dia nalefa tany Mexico. Ny seta faharoa sy ny seta fahatelo koa dia efa nanomboka nofonosina sy nalefa niandry ny mpitatitra entana rahampitso. Ireto sety roa ireto koa dia fitaovana robot. Ny haben'ny fitaovana dia 3600 * 920; 3500 * 780.Hamaky bebe kokoa »
Fiara voalohany feno fiara avo lenta avo lenta an'i Shina ...
Ny tsipika fanaovan-gazety mandeha ho azy haingam-pandeha haingam-pandeha an-trano voalohany novolavolain'i Jinan No. 2 Machine Tool izay vao napetraka ary natolotra tamin'ny fomba ofisialy tao amin'ny toby SAIC-GM Wuhan. Ny servo press line cons ...